Zen ရဲ့အနှစ်သာရကို ခံစားနိုင်မယ့်အဆောက်အဦးကို Awaji ကျွန်းမှာဆောက်လုပ်မယ့် Pasona Group !!! (Ōtemachi ရပ်ကွက်မှာ Awaji ကျွန်းဆီသို့။) - JAPO Japanese News
သော 25 Feb 2022, 13:57 ညနေ
တိုကျိုဘူတာနဲ့အနီး Ōtemachi ရပ်ကွက်မှာ ကြီးမားတဲ့အဆောက်အအုံနဲ့ဂျပန်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံး ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကို ပံ့ပိုးပေးတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Pasona Group ရှိပါတယ်။
ရုတ်တရက် ရုံးချုပ်လုပ်ငန်းဆောင်တာရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို Awaji ကျွန်းဆီကိုပြောင်းရွေ့မယ်လို့ ကြေငြာခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ဂျပန်စီးပွားရေးလောကဟာ အပြင်းအထန်လှုပ်ခပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်သမားစေလွှတ်တဲ့ကုမ္ပဏီလို့ပြောရင် ကုမ္ပဏီပေါတဲ့အရပ်၊ အလုပ်အကိုင်လည်းပေါတဲ့အရပ်မှာပဲရှိသင့်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် တိုကျိုလိုနေရာမျိုးမှာပဲဖြစ်သင့်ပေမဲ့ ရုတ်တရက် နယ်ဘက်လိုကျွန်းအဝေးကြီး Awaji ကျွန်းဘက်ကို ပြောင်းမယ်လို့သတင်းထွက်လာပါတယ်။
အဲ့ဒီလို Pasona Group ဟာဒီတစ်ခေါက် Awaji ကျွန်းမှာ Zen ရဲ့အနှစ်သာရကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်တဲ့ အဆောက်အဦးကိုဆောက်လုပ်မယ်ဆိုပြီး သတင်းလွှင့်ခဲ့တာကြောင့်လည်း ထပ်မံအံ့အားသင့်ရပါတယ်။
ဘာကြောင့် Awaji ကျွန်းကိုရွေးချယ်ရသလဲလို့ပြောရရင် ဂျပန်ဒဏ္ဍာရီအကြောင်းအရာထဲမှာ ပထမဆုံးဖန်းတီးပြုလုပ်ခြင်းခံရတဲ့ကျွန်းဟာ Awaji ကျွန်းဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီနေရာကိုအစွဲပြုပြီး Awaji ကျွန်းသို့ ပိုပြီးနှစ်သက်ပုံရပါတယ်။
ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြီးပြီးဆုံးတဲ့နောက် ဂျပန်ကိုအပြေးအလွှားလာရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါ၊ နိုင်ငံခြားမှာလည်း အထူးသဖြင့် အမေရိကန်မှာ နာမည်ကြီးစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ Zen ကို ဂျပန်မှာလွတ်လပ်စွာ တွေ့ကြုံခံစားနိုင်တဲ့အဆောက်အဦးကို ဆောက်လုပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။
ZEN Wellness SEINEI
မယုံနိုင်စရာ သဘာဝရဲ့ရှုခင်းထဲမှာ ရုံးအဆောက်အဦးဟာရှိနေမှာပါ။
သဘာဝတောတောင်ရေမြေပေါကြွယ်ဝတဲ့ Awaji ကျွန်းရဲ့ရှုမျှော်ခင်းကို ပတ်ပတ်လည်မြင်နိုင်ရမယ့်အဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်ရဲ့ရာသီဥတု ၄ ခုဟာ အသီးသီးလှပကြတာကြောင့်၊ အနည်းဆုံးတော့ တစ်နှစ်မှာ ၄ ကြိမ်လောက်သွားလည်ကြည့်ချင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ZEN ကို တွေ့ကြုံခံစားရရုံသာမက ZEN ဘုရားကျောင်းမှာ စားကြတဲ့ဟင်းလျာ၊ လေဟာပြင်ရေချိုးကန်၊ တည်းခိုဖို့နဲ့ ယောဂ တွေအထိပါ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်ရဲ့ပုံမှန်ဘုရားကျောင်းကတွေးခေါ်တဲ့ ZEN ကိုကျော်လွန်ပြီး အမေရိကန်မှာလုပ်နေတဲ့ Business ZEN နဲ့ နီးစပ်နေသလိုရှိပါတယ်။
ဟင်းလျာပိုင်းမှာလည်း ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးပြုပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေဖို့ သေသေချာချာရွေးချယ်ထားတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ တိုဟူးဟင်းလျာများကို အဓိကထားပါတယ်။
လှပတဲ့သဘာဝရှုခင်းကိုကြည့်ရင်း ရေစိမ်နိုင်မယ့် လေဟာပြင်ရေချိုးကန်
ဒဏ္ဍာရီထဲမှာတော့ ပထမဆုံးပေါ်လာတဲ့ ဂျပန်မြေဖြစ်သော Awaji ဟာ စွမ်းအားကြီးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ထိုနေရာမှာ ZEN နှင့် ယောဂကျင့်ကြပါတယ်။ စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုပြင်ဆင်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အကျိုးပြုစေပါတယ်။
ယခုချိန်မှာ နိုင်ငံခြားသားတွေတောင် လက်ခံလာကြတဲ့ ဂျပန်ဘုရားကျောင်းလည်းရှိပါတယ်။ သို့သော်ဂျပန်မှာ နေရာအများစုဟာ သာမာန်သဘောရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို အခြေခံထားပေမဲ့၊ ဒီလောက်အထိပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်နေတာကတော့ ဂျပန်ပထမဆုံး၊ အဲ့ဒါထက် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်။
၂၀၂၂ ခုနှစ် ၄ လပိုင်း ၂၉ ရက်နေ့မှာ ဧည့်သည်တွေကိုစပြီးလက်ခံမယ်လို့ ကြေငြာထားတဲ့အတွက် ကိုဗစ်ရောဂါတွေပြီးသွားခဲ့ရင် သေချာပေါက် သွားလည်ကြည့်သင့်ပါတယ်။…
ရိုးရာကတ်ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဟယခုနင်း အစ်ရှု
ကျိုတိုသည်ဒေဝါလီခံရဖို့နီးနေပြီလား? ပြဿနာမှာ ကိုရိုနာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ခဲ့ပါ။